UMcCarthy akawuvali umlomo ngegoli likaKekana
ABADLALI beMamelodi Sundowns bejabulela uswidi wegoli likaHlompho Kekana alishaye bebhekene neCape Town City emdlalweni we-Absa Premiership eLucas Moripe Stadium, ngoLwesibili Isithombe: BACKPAGEPIX
ABANEGUNYA lokuqoka igoli lonyaka kwi-Absa Premiership bazoba nomsebenzi olula kule sizini ngoba uHlompho Kekana weMamelodi Sundowns usebenzele kwaba lula ngokushaya igoli okungeke kube khona elingcono kunalo ngo-2019/2020.
Lawa amazwi kaBenni McCarthy opheka iCape Town City okuyiqembu uKekana ashaye kulo le nguzunga yegoli emdlalweni weligi ophele ngo 1-1 ngoLwesibili ebusuku eLucas Moripe Stadium, ePitoli.
Ngomzuzu wesishiyagalombili uKekana udedele enye yamashodi adume ngawo ekude lakhala enethini.
Leli goli likhumbuze uMcCarthy into abeyazi ngoKekana. Ubengawuvali umlomo ngesikhathi ethola ithuba lokukhuluma ngomdlalo ogcine uphele ngo 1-1 ngegoli nalo ebelilihle elishaywe u-Edmilson Dove ngesiwombe sokuqala.
“Ngaphambi kokukhuluma ngicela ukukusho kugcwale umlomo ukuthi uHlompho (Kekana) inkunzi yebhola laseNingizimu Afrika. Kumqoka ukuthi simhloniphe sonke ngoba le nto ayenze namuhla useneminyaka eyenza. Ngokwami ngeke sibe khona isidingo sokuzixaka ngokucubungula amagoli asazongena kule sizini ngoba ngeke libe khona elingcono kunaleli engilibone namuhla. Igoli lakhe bekufanele libasize banqobe ngendlela ebelilihle ngayo kodwa sabuya ngenhlanhla yethu,” kusho uMcCarthy.
Ngesizini edlule umqeqeshi weSundowns, uPitso Mosimane, ubelokhu ekhale njalo ngokuthi kungani uKekana ezitshwa uma kuklonyeliswa abenze kahle.
“Angisayikhulumi indaba kaKekana ngoba uzitshwa ngamabomu uma kuqokwa abadlali bonyaka. Bonke abadlali abakhona kwiligi yethu bayakwazi lokhu kodwa uma sekuqokwa uKekana uyazitshwa,” usho kanje uMosimane ngesizini edlule ekhala ngokuxhoshwa komdlali wakhe emklomelweni ogcine ugoduke noThembinkosi Lorch we-Orlando Pirates.
Ubancome kakhulu abadlali uMcCarthy ngendlela abenze ngayo emdlalweni obunzima. “Bekunzima ngoba besisuka ekuphoxweni enkomishini obekufanele siyivikele. Ngibatshelile abadlali ukuthi nanti ithuba lokukhohlwa ngokuphuma kwiMTN 8 nangempela balisebenzisa.
“Bengiphoqelekile ukusishintsha kancane isikimu ikakhulukazi esiswini. Ngeke udlale ngendlela oyijwayele uma ubhekene neSundowns ngoba uzothwala kanzima,” kuphetha uMcCarthy.
Imidlalo yama-semi final yeMTN 8:
Ngo-Agasti 31: Polokwane City v Highlands Park (Old Peter Mokaba Stadium, 3pm)
NgoSepthemba 1: SuperSport United v Mamelodi Sundowns (Lucas Moripe Stadium, 3pm)
NgoSepthemba 17: Highlands Park v Polokwane City (Makhulong Stadium, 7.30pm)
NgoSepthemba 18: Mamelodi Sundowns v SuperSport United (Lucas Moripe Stadium, 7.30pm)